Isinqumo ngokuphelele ukushintsha ukubukeka kuza umshudo kusukela blue, cishe ngaso sonke isikhathi ezingalindelekile. Kodwa lo mqondo esilawulayo ukuze kube nzima kakhulu ayibulale. Kufika sikhathi esibucayi, lapho kungekho ndlela khona emuva manje ... ke ucosha izinwele umbala ngezinye izikhathi imibala ezingalindelekile kakhulu futhi wafeza icebo lakhe. Nokho, akubona bonke izinguquko ezinjalo ukuze komphefumulo womuntu. Yini okumelwe uyenze? Indlela ukususa upende izinwele ekhaya?
Ungathenga zidayisa izitolo yezimonyo egeza ekhethekile izinwele, ogama Ukwakheka akubandakanyi kokulimaza isakhiwo izinwele amakhorali izingxenye kanye ammonia. Isenzo acid izona iwukuba kukhishwe zokwenziwa Umbala lesi sakhi, futhi kwenzeka ngempela esasile, ngaphandle kokudala umonakalo sombala zemvelo. Can sifinyelele nomphumela omuhle, isicelo ukugeza izikhathi ezimbalwa. Ngokuvamile, ngesikhathi nezinwele ambalwa shades lula, ngezinye izikhathi une ukusebenzisa izidakamizwa ngaphezu kwezikhathi ezinhlanu. Kukhona amalungiselelo akhethekile amaningi, imiyalelo echaza indlela ukususa upende kusukela izinwele ekhaya. Ngokwesibonelo, "Remover", Dikson, "Colorianne Color System", nabanye abaningi.
Ngoba kukhona anjalo olukhohlisayo sonke isikhathi, iye efunde inombolo ezanele zokupheka siwabeka ukuze siwasebenzise engadingeki tints izinwele. Nazi ezinye ethandwa, ngokuyinhloko enquma indlela ugeze off upende amakhambi izinwele abantu.
Evame ukusetshenziswa buso nge zemifino amafutha (alimondi, yefilakisi, burdock, umnqumo), omunye okuyinto yengezwe benta kahle kakhulu kuyo imali ubhiya encane noma brandy. uwoyela ekhethiwe exutshwe brandy / ubhiya, kancane sekuqala ukufudumala, isetshenziswa izinwele, wagqoka cap iraba, zihambisana ithawula bese ushiye amahora amathathu. Khona-ke izinwele is kahle wageza nge imoto, bese siyakazwe ngamanzi acidified (uviniga, kalamula), noma chamomile akhiphe. Ngokufanayo imayonnaise yasetshenziselwa Esikhundleni samafutha.
Indlela ukususa upende kusukela izinwele ekhaya usebenzisa itiyela noma insipho? Umbala nge curls insipho izona kahle futhi ngokushesha, kodwa, kuze kube wajabha kakhulu, awful desiccate kubo. Yingakho emva inqubo Kunconywa ukusebenzisa namafutha okunomsoco.
Buyela ukubukeka yokuqala izinwele ungazama usebenzisa uju buso. Coming mbeni izinwele, uju siqala ukukhiqiza asidi, njenge-hydrogen peroxide, okuyinto Nokho, ngokuphambene, it has a action mnene unikeza izinwele abe luhlaza egolide, futhi kancane evens buqala izinwele. Kufihla isinyathelo kangcono, ngaphambi ukusetshenziswa izinwele zayo shampooed ne ukwengeza isipuni we uLwandle Lukasawoti kanye ingcosana baking soda. On a izinwele kancane manzi lisetshenziswa noju, bakhomba kungukuthi zihambisana uvalwe futhi ushiye imaskhi ku okungenani amahora angu-8.
Indlela ukususa upende kusukela izinwele ekhaya ngosizo yogurt noma omuncu? Le ndlela isekelwe ikhono casein obisi ukuhlanganisa uxhumano nomsebenzisi zamakhemikhali ezakha zokwenziwa izinwele udayi. Ubisi umkhiqizo ngaphambi lokusebenza izinwele kancane sekuqala ukufudumala, okubangela imaskhi futhi agcinwe ngemitha elilodwa nengxenye emahoreni amabili.
Imiphumela emihle siyithola ngokusebenzisa le njongo nenye ocolisekileyo namafutha ne ¼ inkomishi ibhotela. Ukwakheka 35-45ºS sekuqala ukufudumala kuya lokushisa lisetshenziswa izinwele ikhava ekhanda futhi agcinwe 20 amaminithi bese engahashazanga.
Kancane baphungula izinwele emva uhlambulule evamile ye ukumnika of chamomile.
amaphilisi aspirin Five ziyoncibilika ingilazi yamanzi kuzosiza ukususa tint ogqamile kuya izinwele.
Indlela ukususa ngokushesha upende kusukela izinwele? Isiqedile kulesi simo, ngempela, kungcono ugeze khona ekhaya, kancane kancane, ukuze ube nesineke, ngoba ukwelashwa salon, isibonelo, ezifana pickling angajulile noma ezijulile ukulimaza kakhulu isakhiwo izinwele, base abe isikhathi eside ukuphola. Ungakwazi ukusizakala leli thuluzi efakazelwe kuyinto ejwayelekile kakhulu baking soda. Ngezabelo alinganayo, exutshwe soda imoto ingxube oswakanyiswe izinwele, shiya imizuzu emihlanu kuya kweyishumi, engahashazanga kahle, ngempela kubangele okunomsoco conditioner. Ngezinye izikhathi zihambisana leresiphi, ngemva kokusebenzisa imaski uju kuchaziwe ngenhla.
Nge yilowo nalowo owesifazane osuke kungenzeka kanjalo, akukho lutho, kubalulekile ukuba ulungise itayitela, kodwa akunakusetshenziswa akufanele kube nzima - okwethulwa ngomfanekiso wakhe omusha njengoba kuhlosiwe, futhi uyobheka ukubukwa ehluke ngokuphelele, ezimweni ezithile ngisho ngokumthanda. Ingabe ihaba ngempela? Hlola ukubukeka kwakho waphinda ngifuna esibukweni, awazi ukuthi, ungase uzithathele olubandlululayo kakhulu, kodwa empeleni - umuhle?
Zezinwele Creative for ezimfishane: wochwepheshe ngibenze focus
Shampoo "Anafaz" evuselela: imfundo nezimpendulo
Ukukhetha isiqandisisi kuyisinqumo esinzima
Lingonberry engadini: zokutshala nokunakekela, ukutshalwa